လက်ငင်း Pot ဝက်သားခုတ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
hollandaise ငံပြာရည်နှင့်အတူကြက်သား cordon bleu
နှေးနှေး cooker အတွက် box ကို brownie ရောနှော
လက်ငင်း Pot ဝက်သားခုတ်
လက်ငင်း Pot ဝက်သားခုတ် perfectlyုံအရည်ရွှမ်းထွက်လာပြီးထိုကဲ့သို့သောအရသာမျိုးရှိသည်။ ကျနော်တို့ကဒီလွယ်ကူသောဝက်သားခေါက်စာရွက်တစ်ရွက်နှင့်အတူစာကျွေးခြင်းကိုနှစ်သက်ကြတယ် အာလူးကြော် ဒါမှမဟုတ် ကြက်ဥခေါက် !
အရသာအမြင့်ဆုံးအတွက်အရိုးနဲ့ချက်ပြုတ်ရတာကြိုက်တယ်။ Instant Pot ကိုအရသာမဲ့သောဝက်သားခေါက်များကိုလည်းဤနည်းအတိုင်းပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၀ က်သားခုတ်သည်အရွယ်အစား၊ အထူနှင့်စကျင်ကျောက်အပေါ် မူတည်၍ ဖိအားပေးစက်တွင်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင့်တွင်ဝက်သားခုတ်ဖြတ်တောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါကချက်ပြုတ်ချိန်ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။
ငါအရိုးများနှင့်အတူအထူ 3/4 'မှ 1' ထူ chops ကိုသုံးပါ။ လိုပဲ ကြက်သားကင် အသားတွင်အရိုးများသည်နူးညံ့ပြီးအရသာများစွာရှိသည်။ သငျသညျ (သို့မဟုတ်ရနိုင်) ဝက်သားကင် (ငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်သော) ရှိပါကသူတို့သည်သင်၏ပါးစပ်နူးညံ့သောအရည်ပျော်ထွက်လာပေမယ့်သူတို့အထူနေလျှင်သင်အချိန်နည်းနည်းထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ဖိအားပေးစက်တွင်ပါးလွှာသောဖြတ် (1/4″) ၀ က်သားခုတ်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အရိုး -In စင်တာဖြတ် Chops ၁၅-၁၈ မိနစ်ခန့် (၃/၄ 3/ ၁၅ မိနစ်နှင့် ၁ 18 အထူ ၁၈ မိနစ်) ။
အချည်းနှီးသောခါး Chops ငါ 8-10 မိနစ်မှချက်ပြုတ်။
ဝက်သားကင်: ၀ က်သားတုံးမှ ၁″ အထူလိုအပ်သည်။ မိနစ် ၂၀ ခန့်၊ သူတို့သည်အလွန်နူးညံ့သောထွက်လာသည်။
မင်းရှိရင် အေးခဲဝက်သားခုတ် သင်ခဏတာဖိထားပါက Instant Pot အေးခဲနေသောဝက်သားခေါက်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၅ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောထပ်ပေါင်းထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါတောက်ပခြေလှမ်းကိုကျော်သွားပါ။ သတိပြုရမည်မှာ Instant Pot သည်သင်အေးခဲနေသော အချိန်မှစ၍ ဖိအားတက်ရန်ကြာမြင့်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။
လက်ငင်း Pot တွင် ၀ က်သားခုတ်များပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူပါသည်။
ဝက်သားကိုခုတ်ပါ ခုန်တက်သွားတယ် ။ (ငါတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုအပိုမြန်စေရန်အတွက်ဒယ်အိုးထဲတွင်ပြုလုပ်သည်)
အရေးကြီးသည် - ခုတ်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဟင်းရည် / ရေထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဒယ်အိုးအလွန်ကောင်းစွာ deglaze (အောက်ခြေချွတ်အားလုံး -bits ခြစ်) ။ ကျန်ရှိသောမည်သည့် bits မဆိုထိတ်လန့်မီးလောင်ရာသတိပေးချက်စေနိုင်သည်
လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းချက်ပြုတ်ပြီး Instant Pot ကို ၁၀ မိနစ်ကြာလွှတ်ပေးပါ
Thraven to Gravy:
ညီတူညီမျှသောပြောင်းဖူး / ရေနှင့်အတူပြောင်းဖူး slurry လုပ်ပါ။
Instant Pot ကိုSautéသို့ထားပါ။
အရသာရှိတဲ့ငံပြာရည် (သို့) ဟင်းရည်တွေပြုလုပ်ရန်သင်၏ Instant အိုးအောက်ခြေ၌ကျန်နေသောအရည်ကိုသုံးပါ။ သငျသညျ¼ဝိုင်အနီရောင်ခွက်တစ်ခု, တစ်ဇွန်းသို့မဟုတ်ထောပတ်နှစ်ခုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ထက်ဝက်လျှော့ချသည်အထိမိနစ်အနည်းငယ်မျှမျှတည်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်မိသားစုကိုချစ်သော Instant Pot ၀ က်သားခုတ်ချက်ချက်ပြုတ်နည်းတစ်ခုမှာ Instant Pot မွေးမြူရေးခြံ ၀ က်သားခုတ်ဖြစ်သည်။ ဒီစာရွက်ဟာအထူးသဖြင့်အရသာရှိတဲ့ငံပြာရည်ပဲဖြစ်ပါတယ် မွေးမြူရေးခြံရာသီရောနှော အဆိုပါဟင်းရည်မှ!
ဝက်သားခုတ် n 'အာလူးညစာတစ် ဦး ချစ်ဘွယ်သောအမဲသားကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနှစ်သိမ့်အစားအစာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က mashed သို့မဟုတ်နှင့်အတူကောင်းစွာတွဲ လွယ်ကူသောမီးဖိုကင်အာလူး ။ လတ်ဆတ်တဲ့ အီတလီအသုပ် , လှော်စိမ်းလန်းသောပဲ သို့မဟုတ် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း သင်၏အစာအာဟာရပြည့်စုံပြီးအရသာစေမည်။
ကျန်ရှိသော Instant Pot ဝက်သားခုတ်သည်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သုံးရက်အထိသိမ်းထားလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာရေခဲသေတ္တာထဲမှာတစ်လနေရမယ်။
သင် Instant Pot ကိုအသားမပါသော ၀ က်သားခေါက်များပြုလုပ်ပါကကြွင်းကျန်များကိုအန်စာတုံးရန်၊ အလွယ်တကူသုတ်ရန်သို့မဟုတ်လှီးရန်အတွက်အလွယ်တကူကြော်နိုင်သည်။
Crock Pot ဝက်သား Chops - ပိုမိုလွယ်ကူမဖြစ်နိုင်ပါ
ဝက်သား Teriyaki ကင် - လူအစုအဝေးအဘို့ကြီးသော
မှော်ပါမှိုဝက်သားခေါက်များ - အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးငံပြာရည်!
Dr. Pepper Crock Pot ၀ က်သားစာရွက်ကိုဆွဲသည် - နူးညံ့သိမ်မွေ့ကျလိမ့်မည်
ဝက်သားတင်ပါးဆုံရိုး (ဘကင်သို့မဟုတ်ဖုတ်ထားသော) - စူပါအရည်ရွှမ်း
လက်ငင်း Pot ဝက်သားခုတ်နှင့် Gravy
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်55 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ ၅ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ချက်ချင်း Pot ဝက်သားခေါက်များသည်နူးညံ့။ အရည်ရွှမ်းသည်။ ဤလွယ်ကူသောဝက်သားခေါက်ကြော်ကိုအာလူးသို့မဟုတ်ကြက်ဥခေါက်တစ်ခွက်နှင့်ကျွေးမွေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် အလေးချိန်ပေါင် ဝက်သားခုတ်အတွက်အရိုး or 'သို့မဟုတ်ထူ
▢၁ ကြက်သွန်နီ အရက်
▢၃ ခွက် မှိုများ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ, အချပ်
▢1 ¼ ခွက် အမဲသားဟင်းရည် ခွာ
▢၁ မှိုဟင်းချို၏မုန့်နိုင်ပါတယ် သိပ်သည်း
Instant Pot ကို SAUTEE သို့ဖွင့်ပါ။ ဆီထည့်ပါ။
အညိုရောင်ဝက်သားသည်တစ်ခေါက်လျှင် ၂ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်သုတ်နိုင်သည်။ Instant Pot မှဖယ်ထုတ်ပြီးဖယ်ထားပါ။
ချက်ချင်းဟင်းရည် ၁ ခွက်ကို Instant Pot ထဲသို့ထည့်ပြီးအိုး၏အောက်ခြေမှအညိုရောင် -bits များကိုခြစ်ပါ။ (လောင်ကျွမ်းခြင်းသတိပေးချက်မရရန်ကောင်းစွာ Deglaze) ။
နိုင်ရန်အတွက်အချပ်မှိုများ, ကုန်တယ်ကြက်သွန်, အညိုရောင်ဝက်သားခုတ်ထည့်ပါ။ မှိုဟင်းချိုနှင့် parsley နှင့်အတူထိပ်တန်း။
အဖုံးကိုပိတ်ပြီး Instant Pot ကို ၁၅ မိနစ်အမြင့်ဆုံးဖိအားသို့ပြောင်းလဲပါ (ဖိအားကိုရောက်ရှိရန် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်) ။
ပြီးတာနဲ့ Instant Pot ကို ၁၀ မိနစ်ကြာလွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုပါ။ ကျန်ရှိသောဖိအားကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
အဆိုပါဟင်းရည်ထဲကနေဝက်သားခုတ် Remove နှင့်ဘေးဖယ်ထားကြ၏။
ကျန်ရှိသောဟင်းရည်နှင့်ပြောင်းဖူးမှုန့်ကိုပန်းကန်သေးသေးလေးထဲ၌ပေါင်းစပ်ပါ။ ဟင်းရည်ကိုဆူအောင်တည်အောင်ယူရန် Instant Pot ကို SAUTEE သို့ဖွင့်ပါ။ လိုချင်သောကိုက်ညီမှုရောက်ရှိရန်တစ်ကြိမ်မှာပြောင်းဖူးအရောအနှောကိုအနည်းငယ်ထည့်ပါ။
ဒီစာရွက်ကိုအသုံးပြုသည် လက်ငင်း Pot 6qt ။ ဤစာရွက်တွင် 3/4 'အရိုး -In ခုံးများကိုအသုံးပြုသည်။ အချည်းနှီးသောစင်တာဖြတ်အခိုးများသည်အချိန်နည်းနည်းလိုအပ်သဖြင့်သူတို့သည်ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိပါ။
သော့ချက်စာလုံးလက်ငင်း Pot ဝက်သားခုတ် သင်တန်းအဓိကသင်တန်း ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။